Sergio Reguilon Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Sheekada Carruurnimada Emiliano Martinez iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Sheekada Carruurnimada John Lundstram Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekadii oo dhameystiran oo Kubadda Caanka ah oo loo yaqaan naaneyska “Qunyar". Sheekadeena Carruurnimada John Lundstram Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Noloshii Hore iyo Sare u qaadida John Lundstram. Sawir-amaahda Toffeeweb, BBC, MSN iyo LiverpoolEcho
Qulqulka wuxuu ku lug leeyahay noloshiisa hore / asalka qoyskiisa, waxbarashadiisa / dhisida shaqadiisa, noloshiisa hore, wadada uu ku caan baxo, sheekooyinka caannimada, nolosha xiriirka, nolosha shaqsiyan, xaqiiqooyinka qoyskiisa, qaab nololeedkiisa iyo xaqiiqooyinka kale ee aad looga yaqaan.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay inuu ka kacay cagaha Ingriiskaoo dhan inaad noqotid ka garaaca kooxdiisii ​​korontada ahayd ee Sheffield United kaasoo bilow fiican u ahaa Xilli xilli ciyaareedkii Premier League ee 2019 / 2010. Si kastaba ha noqotee, kaliya tiro yar oo ka mid ah taageerayaasha kubbadda cagta ayaa tixgeliya noocayaga John Lundstram's Biography oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekooyinka Carruurnimada Xogta Waalidka - Asalka Qoyska iyo Nolosha Hore
John David Lundstram wuxuu ku dhashay Maalinta 18 ee Febraayo 1994 waalidkiis oo ku nool magaalada Liverpool, Boqortooyada Ingiriiska. Ninka Ingiriisiga ah ee ka soo jeeda Waqooyi-galbeed England wuxuu u dhashay cunugga labaad waalidkiis oo jeclaa oo hoos ku sawiran;
La kulan waalidiinta John Lundstram. Muuqaalka Muuqaalka- Instagram
John Lundstram ayaa ku soo barbaaray asal ahaan qoyska dabaqadda dhexe ee uu ka shaqeeyay aabihiis oo ka soo shaqeeyay kibiskiisa maalinlaha ah ee ka yimid magaalada Liverpool. John Lundstram wuxuu qoyskiisu asal ahaan ka soo jeedaa magaalada weyn ee [Liverpool], oo caan ku ah khadka tareenka ee adduunka ugu horreeya ee adduunka (oo laga dhisay 1830) iyo aqoonsigiisa buugga Buugga Guinness Book of Records inuu yahay Caasimadda Ingiriiska ee pop.
John Lundstram kaligiis ma uusan kogin, waalidkiisna waxay la wadaagaan BUT oo ay weheliso walaashiis ka weyn oo caan ah oo la yiraahdo Jodie Lundstram (7 sano jirkiisa). Ma ogeyd?… Jodie Lundstram waxay ahayd jilaa caan ah Taxanaha telefishanka Ingiriiska 'Kabaha caajiska ah'.
Sheekooyinka Carruurnimada Xogta Waalidka - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Waxbarashadiisa koowaad- ka jawaabista su aasha cas / buluugga: It macno malahan inaad asal ahaan ka soo jeedaan qoyskaaga magaalada Liverpool. Haddii aad tahay dibad-joog ama aan muhaajir ahayn, illaa inta cagguagu yahay xagga magaalada, waxaa lagu weydiin doonaa su'aasha ugu muhiimsan ee ay tahay Ma waxaad tahay casaan [Liverpool] or buluug ah [Everton] ?.
Waxbarashada koowaad ee Lundstram waxay noqotay sidii ilmo oo kale si looga jawaabo su'aasha. Dhibcaha: Society19.
Intaad ka jawaabeyso su'aasha, waa inaad duceysataa inaad si sax ah uga jawaabto. Tan macnaheedu maahan inaad doorato koox dhexdhexaad ah sida Tranmere Rovers. John Lundstram jawaabtiisu waxay ahayd Casaan [Liverpool], xulasho ay la galeen inta badan xubnaha qoyskiisa ee taageera naadiga Ingiriisiga weyn.
Wuxuu caawiyaa inuu yahay taageere kubada cagta oo ciyaarta mararka qaar ciyaaraya kadib iskuulka, Lundstram yar wuxuu ogaa inuu leeyahay karti uu magac ugu yeesho naftiisa xirfadiisa kubada cagta. Goor hore, nin Ingiriis ah oo adag oo jilicsan ayaa bilaabay inuu barto ganacsigiisa sida xiddig qadka dhexe ka ciyaara garoonka.
Sida caruur aad u badan oo rajaynaya reds, Lundstram wuxuu doonayay wax walba si uu ugu biiro kooxdiisii ​​uu jeclaa, Liverpool. Sikastaba, fursad la’aan ayaa caqabad ku noqotay horumarkiisa markii loogu yeeray maxkamad naadiga. Isaga oo dhaqaajinaya, wuxuu u weecday deriskiisa iyo kooxda ay xafiiltamaan, Everton oo ku casuumay wadooyin.
Sheekada Carruurnimada John Lundstram iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Mudnaanta Hore
Maxkamad guuleysata ayaa aragtay John Lundstram sanadka 2002 isagoo iska diiwaangelinaya akadeemiyada akadeemiga ee Everton taasoo u siisay madal inuu dhigo aasaaskiisa shaqo. Markii ay ku soo biirtay naadiga Merseyside, waxaas oo dhan markii hore farxad bay ahayd. Laakiin John yari waa inuu ku allabaryo waxyaalo badan magaca shaqadiisa. Tusaale ahaan, tHalkan waxaa ah wakhtiyo uu seegay xafladaha dhalashada ee muhiimka ah, bulsheedyada reerka iyo waxyaabaha uu ku hamiyey dugsiga. Laakiin dhinaca isugeynta, yar Lunny (sawirka hoose) wuxuu sameynayay wuxuu jecel yahay- ka dhigista hamigiisa shaqadiisa.
Nolosha Hore ee John Lundstram oo leh kubada cagta
Lundstram wuxuu muujiyey balanqaadyo waa weyn intii uu kor u qaaday safka akadeemiyada kooxda Everton. Markii uu qoyskiisu asal ahaan ka soo jeedo Merseyside (oo uu ku dhashay Liverpool), wuxuu xaq u leeyahay a deeq-waxbarasho oo waqti-buuxa ah si ku-meel-gaar ah u dhow July 2010.
Laba sano kadib Isaga oo ka soo shaqeynaya heerarka akadeemiyada, Lundstram wuxuu ku koray kooxda sare ee Everton aad ayuu rajo weyn ugu qabay mustaqbalkiisana David Moyes.
Haa! Tababarihii hore ee Everton ayaa aad loogu jeclaa doorka uu dammaanad ka siiyay ciyaartoy da 'yarta ah oo ka tirsan kooxda sare ee Everton halka Lundstram uu ka mid ahaa kuwa ugu cadcad waqtigaas. Hase yeeshe, waxyar baa Lunny ogaa WAQTIGA DHALINYARADA ayaa jidkiisa soo socda.
Sheekada Carruurnimada John Lundstram iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Waddo adag oo lagu sheekeysto sheekada
Qalbi jab ka yimid David Moyes: Bishii Maay 2013, iyadoo la raacayo Sir Alex Ferguson ka fadhiistay Man United, Moyes wuxuu ku wargaliyay Everton inuu ka tagayo kooxda inuu guuleysto Ferguson. Warkan, intii ay xiiseyneysay David Moyes, uma fiicneyn Lundstram kaasoo murugooday in maamulka Everton iyo dhamaan shaqaalaha tababarka ee kooxda ay dhamaantood indhaha ku hayaan daaqa cagaaran ee Man United.
Wixii Lundstram ka fikiray runti waa run. Ma ogeyd?… David Moyes Waxaa bedelay Roberto Martínez kaasoo keenay afar xubnood (wajiyo yaab leh) shaqaalihiisa qolka jiifka ee Wigan Athletic Everton.
Lundstram wuu xanaaqsanaa markuu arkay xubno ka tirsan David Moyes“Shaqaalaha qolka jiifka ee Everton ka dib markii ay u dhaqaaqeen Manchester United Tan waxaa raacday markii uu Roberto Martinez la soo saxiixday ciyaartoy cusub kooxdiisa cusub ee Everton, go'aankaas oo sababay Lundstram (hoos ku sawiran) ka baqo oo ka hadal dhowr jeer mustaqbalkiisa.
Poor John Lundstram oo ka turjumaya mustaqbalkiisa Everton. Astaanta Muuqaalka Toffeeweb
In kasta oo uu u baxay inuu bixiyo khidmadaha amaahda, Lundstram wuxuu wali dareemay inaysan u qalmin waqti dheeri ah oo uu isku dayay inuu u dagaallamo booskiisa maadaama uu si ula kac ah u dhaawacay Roberto Martinez. Erayadii xanuunka badnaa;
"Goorma David Moyes waxaan joogay Everton, waxaan ku jiray kooxdiisa iyadoo kooxdii ugu horreysay ay sifiican u shaqeynayaan laakiin isla markii uu kooxda ka tagay, aniga isku mid maahan. Kama qeyb galin kooxdii ugu horeysay ee Martínez. Taasi waxay jabisay kalsoonideydii, dib ayey ii hagaajisay oo waxay saameyn ku yeelatay horumarkaygii.
Ma ogeyd?… Ka dib markii uu si lama filaan ah xilli xilli ah u ciyaaray kooxda waddankiisa (Everton), Lundstram saboolka ah ayaa kooxda laga sii daayay. Xaqiiqdii, awaxaan ka qalin jabiyay akademiyada akadeemiga iyo kubada cagta dhalinyarada ah ee ku nooleyd sii deynta naadiga ayaa si fiican u ogaan doona xanuunka qiirada leh iyo cawaaqib xumada maskaxeed ee uu ku yeelan karo. John Lundstram waalidkiis, xubnaha qoyska iyo saaxiibbada dhow (oo ay kujiraan saaxiibadiisa kooxda Everton) ayaa garab istaagay xiliyadan adag.
Sheekada Carruurnimada John Lundstram iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Kusoo sharax sheekada
U guuritaanka: Kadib markii laga sii daayay Everton, Lundstram wuxuu ogolaaday waalidkiis iyo qoyskiisa inay aadaan heerka ugu hooseeya kubada cagta Ingariiska si ay u helaan kubad heerka koowaad ah. Isaga oo ka hadlaya go’aanka, ayuu mar yidhi;
“Waxay ahayd go'aankii ugu fiicnaa ee abid aan gaadho. Ujeedadayda koowaad waxay ahayd markii hore inaan isku dayo inaan ku laabto Horyaalka, ka dibna aan aado Premier League si aan u caddeeyo qiimahayga ”
Safarka Lundstram wuxuu ku bilaabmay kooxda League 2 ee Oxford United ka hor inta uusan ku biirin kooxda dhawaan loo soo dalacsiiyay ee Sheffield United bishii July 2017. Kaalintiisii ​​yaraa, wuxuu ka caawiyay kooxda inay dib ugu soo laabato heerka koowaad (Premier League) ka dib toban sano oo maqnaa.
Tijaabinta taageerayaasha Sheffield United ayaa qaldan: Xiriirka udhaxeeya ciyaartooy iyo maareeyuhu wuxuu badanaa noqon karaa farqiga udhaxeeya guusha ama aruurinta dhibaatada Maamulaha Sheffield United Chris Wilder wuxuu xiriir dhow la yeeshay John Lundstram kahor xilligii 2019 / 2020. Wuxuu sii daayay dadweynaha in Lundstram uu noqon doono ninkiisa furaha u ah Xilli cusub ee 2019 / 2020, oo ah go'aan sababay dhaleeceynta aadka u weyn ee ka imaaneysa taageerayaasha Sheffield madaama ay ogaayeen inuu kali ku ciyaaray intii lagu jiray kor u qaadista xilli ciyaareednimada Championship.
In kasta oo culays weyn la saaray in uu iska tuuro Lundstram, haddana macallinka Sheffield Chris Wilder wuxuu ka horyimid rabitaankii taageeraha isagoo mashruuc ka dhigaya inuu yahay ninka ugu weyn ee xoojinaya boobka iyo quruxda kooxdii hanka lahayd ee Sheffield United. Go'aanka ayaa ugu dambeyntii qaatay kadib markii Lundstram uu dhalleeceeyay dhammaan natiijooyinka si uu u gaaro heerkiisa meteoric ee kooxda heerka cajiibka ah ee 2019 / 2020 Premier League bilowgiisa.
Chris Wilder wuxuu ka horyimid taageerayaasha Sheffield United isagoo fursad siiyay noloshiisa John Lundstram. Amaah FourFourTwo
John Lundstram, waxaa jiray laba ergo iyo dhibco in la caddeeyo. Midda hore waxay ahayd in la caddeeyo hal dhibic oo loogu talagalay taageerayaasha Sheffield United (oo uu sameeyay) tan labaadna waa in laga aarsado kulankii Everton, hubinta in kooxdiisu ay garaacdo kulankoodii ugu horreeyay (Sebtember 21st, 2019).
MADAXWEYNAHA SWEET: Hawsha ugu weyn ayaa ugu dambeyntii timid maalintii 21st ee Sebtember 2019 markii Sheffield uu u baxay kulanka ay la ciyaarayaan Everton. Qaar ka mid ah taageerayaasha Everton, daawashada ciyaartooy la tartamaya sifiican u ciyaara ama u dhaliya goolal ayaa ka mid ah qeybna ciyaarta. Laakiin markaan arkay John Lundstram (qof horey ula ciyaaray iyaga) ahaanshaha ninka ugu weyn guuldaradoodii (0-2) ayaa difaacay taageerayaasha iyo ciyaartoydaba.
John Lundstram wuxuu xaqiijiyey in kooxdiisa ay ka adkaatay Everton, kooxdaas oo mar muujisay iimaan la'aan. Tani waxay ahayd wixii uu u sheegay Radio Sheffield ciyaartaas shucuurta kadib ciyaartaas Sheffield United kanaalka Youtube).
Sida wakhtigii qorista, John Lundstram wuxuu ka soo qaatay amaah amaah ah, isaga oo aan wax koob ah ka helin Championship si uu u noqdo wadnaha garabka kooxda koronto ee Sheffield United, waana ciyaar ka dhigeysa mid ka mid ah khadka dhexe ee ugu fiican qarnigiisa. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada John Lundstram iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Xiriirka
Isaga oo meteoric kor uqaaday, waxaa hubaal ah in inta badan taageerayaasha kubada cagta ay tahay inay weydiiyaan hadii John Lundstram uu qabo gabar ama gabar. Haa, thalkan ma diidi karo xaqiiqda ah in muuqaalkiisa qurxoon, dhoola cadeyn qurux badan oo ay weheliso tayadiisa soo jiidasho leh kama dhigeyso inuu noqdo kan ugu sareeya liiska gabar kasta ee ay rabto gabar.
Taageerayaasha ayaa weydiiyay su’aalo ku saabsan cidda uu noqon karo John Lundstram Gabadha ay saaxiibka yihiin. Amaah- Instagram
Sida wakhtigii qorista, Waxay u muuqataa in John Lundstram uu sameeyay dadaal dheeri ah oo uusan ku muujin gabadhiisa ama xaaskiisa (taasi waa haddii uu mar hore guursaday si qarsoodi ah). Si kastaba ha noqotee, tixgelinta dabeecada aan la cafiyin ee Premier League marka la eego xiriirka xiriirka si caam ah, waxay noqon kartaa in Lundstram uu kaligiis yahay, taasoo tilmaamaysa jiritaanka WAG.
Sheekada Carruurnimada John Lundstram iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Naftaada Shaqsiga
Ogaanshaha John Lundstram Noloshiisa Shakhsiyeed waxay kaa caawinaysaa inaad sawir buuxa ka hesho shakhsiyaddiisa bannaanka ciyaarta. Bilaabista, waa qof aad u saaxiib ah kana fog kubada cagta, waxaad si fudud uga heli kartaa isaga oo kula jooga dad aad u kala duwan.
Ogaanshaha John Lundstram Xaqiiqda Nolosha Qofka. Sawir-amaahda Instagram
Adoo ka fekeraya sawirka hoose, waxaad ogaan doontaa in John Lundstram uu leeyahay faham faham nolosha ah. Waa qof ku gaari kara xiriirka ugu wanaagsan ee shucuurta leh ee la nool noolaha kale isagoo iska daaya dhaqale iyo inuu dhigo baahiyaha asxaabtiisa hortiisa. Wuxuu sameeyaa tan isagoo aan fileynin wax soo celin.
Sheekada Carruurnimada John Lundstram iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Qoyska
John Lundstram wuxuu ka yimid qoys reer Liverpool ah oo ay ka buuxaan hibo kale oo aan ahayn kubad. Guusha uu ka gaadhay hawshiisa iyo tii uu ka helay walaashiis waxay ku kaceen qayb qoyskooda ah madaxbanaanida dhaqaale. Walaasheeda weyn Lundstram, Jodie Lundstram (sawirka hoose) waa jilaa xirfad leh oo markii ugu horreysay ku aragtay guul doorkeedii ku aaddanaa showga dhabta ah ee Ingiriiska ee Quful Scousewives.
John Lundstram walaashiis- Jodie Lundstram. Sawir-amaahda Wadada dhaw
Waqtigaan la joogo, Jodie Lundstram waa ganacsade waqti dheer ku soo qaatay Liverpool. Waxay aasaastay Lash Beach UK iyo Aesthetics (A spa spa) oo ku taal Liverpool.
John Lundstram, noqoshada xubinta labaad ee qoyskiisa si uu u gaadho heerka caanka ah wuxuu abuuray dareen qoto dheer oo macnaha iyo ujeedada nolosha waalidkiis. Sida Jodie Lundstram waxay ku tilmaantay boggeeda Instagram, thooyo heersare ah iyo aabe ayaa goob joog u ahaa maalinta ugu farxada badan noloshooda markii ay daawanayeen canuggooda oo ciyaaraya Premier League markii ugu horeysay. Hoosta iyo aabe labadaba waxay ku faraxsan yihiin inay adeegsadeen xirfadahooda waalidnimo si kor loogu qaado loona dhiiri geliyo awooda John Lundstram.
John Lundstram wuxuu ku raaxeysanayaa nolosha ka dib markii uu arkay wiilkooda oo quudinaya Premier League. Muuqaalka Muuqaalka- Instagram
Xubnaha kale ee qoyska: La kulan xubnaha kale ee qoyska John Lundstram markay sawir ka qaadanayaan hooyada guriga Lundstram. Sida la arkay, qoyska John Lundstram waa unug dhow oo ilaaliya xiriir adag. Waa qeexitaan sida ay u egtahay in qoyska Liverpool ee casriga ahi ay u egyihiin.
La kulan xubnaha kale ee qoyska John Lundstram. Muuqaalka Muuqaalka- Instagram
Sheekada Carruurnimada John Lundstram iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - LifeStyle
Thanks to mustaqbalkiisa ciyaareed ee kubada cagta, Lundstram wuxuu ku sameeyay qayb ka mid ah madaxbanaanida dhaqaale. Hadda inaad barato qaab nololeedkiisa waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir wanaagsan oo heerka noloshiisa ah.
John Lundstram waa qof wakhtiga qoraalku ku adkaado inuu siiso lacag aad u badan fikir halkii uu diiradda saari lahaa riyooyinkiisa xirfadeed iyo yoolalka. Waxaa jira lacag ku filan oo lagu noolaado nolol caadi ah oo keliya baahida aasaasiga ah ee naftiisa iyo xubnaha qoyskiisa. In kasta oo uu mushahar ahaan u weyn yahay markii uu ahaa ciyaartoy kubada cagta ah, waxaa cadaalad ah in John Lundstram uu ka hortagayo qaab nololeed qalaad - oo si fudud lagu arki karo waxaad ka arki karto hoos.
Ogaanshaha John Lundstram Xaqiiqda Nolosha. Astaanta Muuqaalka Gym4U iyo Instagram
Sheekada Carruurnimada John Lundstram iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Ku Saabsan Magaca Lundstram: Qarnigii 19th, dadka leh magaca Qoyska Lundstram waxay ahaayeen kuwa Blacksmiths-ka badan iyo Beeraleyda. (Source- Abtirsi.Co.Uk).
Dhacdooyinka Ku Dhacey Maalintii Dhalatay: Ha iloobin in sanadkii Lundstram uu dhashay, Brazil ayaa ku guuleysatay Koobkii Adduunka ee 1994 ee Mareykanka. Sidoo kale, Koonfur Afrika waxay qabatay doorashadii qaran ee ugu horreysay ee dhex-dhexaad ah (Abriil 29) taasoo keentay in halyeygooda Nelson Mandela loo doorto Madaxweynaha.
Fayraska Ebola ee 1994: Sannadkii John Lundstram wuxuu ku dhashay, a Faafida cusub ee fayraska dilaaga ah ee Ebola ayaa bilaabmay, si sax ah 9th of May 1994 ee Zaire. Waxay diiwaangelisay heerarka ugu sarreeya ee dhimashada fayras kasta ee bini-aadamka ee abid bini-aadamku yaqaan.
Rwanda ee 1994: Fiidnimadii 6 Abriil 1994 (sanadka Lundstram ku dhashay), diyaarad sidda madaxweynaha Rwanda Juvénal Habyarimana iyo madaxweynaha Burundi Cyprien Ntaryamira, oo labaduba Hutu ah, ayaa lagu laayay gantaallo hawada-sare ah markay diyaarinaysay inay degto Kigali, Rwanda.
Sanadkan 1994, an Dagaalkii Sokeeye ee ku-meel-gaarka ahaa ee ka dhacay Rwanda inta u dhexeysa Aqlabiyad Hutus iyo dadka laga tirada badan yahay ee Tutsis ka dib dilkii Madaxweynaha waddanka ayaa horseeday in kabadan nus milyan oo qof lagu dilay dagaalladii sokeeye.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhriskayaga Taariikhda Dhalashada ee John Lundstram Plus Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Buugga xusuus qorka ee Sheffield United
Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 16, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 13, 2020
Marouane Fellaini Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadidan
John Stones Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Aan Laheyn
Alex Iwobi Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha